जर्मनी युरोपेली संघ को अग्रणी राज्य को छ। 357 वर्ग यसको क्षेत्र। एम मी, र जनसंख्या - बारे 83 लाख मान्छे। जर्मन उद्योग मात्र होइन क्षेत्रमा तर संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली मध्ये एक मानिन्छ। पूर्व-युद्ध र पोस्ट-युद्ध (द्वितीय विश्व युद्ध): यसको विकास दुई महत्त्वपूर्ण अवधि भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
जर्मनी मोटर उद्योग
2012 को रूप मा, राज्य मशीनरी को उत्पादक क्षेत्रहरु बीच undisputed नेता छ। प्रमुख स्थिति जर्मनी मा मोटर वाहन उद्योग लिन्छ। यो क्षेत्र जर्मन राष्ट्रिय घमण्ड छ छ। "ओपल", "मर्सिडीज बेन्ज", "ओडी", "बीएमडब्ल्यू", "वोक्सवैगन": यो देशमा, यो सबै भन्दा ठूलो कार निर्माता छ। तिनीहरूले उपभोक्ता मिसिन, संसारका सबै कुनामा लोकप्रिय प्रस्ताव। एक व्यक्ति जर्मनी मा संकलित एक कार, किन्छ भने, यो एक प्राथमिकताओं यसको गुणस्तर को पक्कै छ। यस्तो कार सही र विश्वसनीय छन्। जर्मन उद्योग उच्चतम स्तर मा आफ्नो ब्रान्ड गुणस्तर समर्थन गर्दछ।
पानी, रेल परिवहन: मोटर वाहन उद्योग बाहेक उद्योग को अन्य खण्डहरूमा को धेरै उच्च दर छ। धेरै ध्यान राजमार्ग र सडकों को एक नेटवर्क को विकास भुक्तान छ। यो खण्ड, अप्रत्यक्ष albeit, तर पनि परिवहन क्षेत्र लागू हुन्छ।
जर्मनी खाद्य उद्योग
यो उद्योग मा सबै भन्दा विकसित खण्डहरूमा रक्सी र मदिरा छन्। विशेष ध्यान अन्तिम हुनुपर्छ। जर्मनी यसको बियर लागि anciently प्रसिद्ध। यो राज्य इलाका मा पेय को बारे चार हजार प्रजातिहरू बनेको छ। सबैभन्दा रोचक पनि सानो सहर मा एउटा सानो निजी भठ्ठी छ, र प्रमुख शहरहरूमा कहिलेकाहीं छ। उत्पादित बियर को बारे तेस्रो निर्यात भएको छ।
तर, 2000s देखि, जर्मन को परम्परागत स्वाद परिवर्तन गर्न थाले। क्लासिक बियर को सट्टा स्थानीय झन् रक्सी रुचि गर्न थाले छ। यो रक्सी उद्योग विकास गर्न पुगे। जर्मनी मा उद्योग बनाउँछ जो मोसेल्ले र राइन रक्सी, देश बाहिर सम्म ज्ञात।
माथिको-उल्लेख क्षेत्रहरु साथै विशेष ध्यान गर्नुपर्छ औद्योगिक बाहिर उपकरण, इलेक्ट्रनिक्स, कम्प्युटिङ र मिसिन उपकरण।
यो लामो जर्मनी यसको प्रकाश औद्योगिक उत्पादनहरु को लागि ज्ञात गरिएको छ। अब हुनत बजार मा यसको मात्रा र कम (विश्वव्यापी प्रवृत्ति), तर जर्मन निर्माण प्रविधि सबै भन्दा राम्रो को एक मानिन्छ। जर्मनी मा, रासायनिक उद्योग रूपमा। उद्योग मा एक विशेष स्थान प्लास्टिक र पेंट र वार्निश को उत्पादन मा लगे।
देश पनि आयात कच्चा माल को लागि मुख्य रूप प्रयोग भएको छ जो इस्पात उद्योग, विकास भएको छ। पाठ्यक्रम मा आफ्नो सामाग्री को पग्लियो गर्न एक स्क्रैप धातु छ। जर्मनी बिस्तारै पहिले मा लुढका आपूर्ति हुनत, एक आयोतक उद्योग मा भएको छ विश्व बजार। पछिल्लो विश्वव्यापी संकट समयमा, सरकार राम्रो र धेरै विश्वसनीय साझेदार रूपमा यसको आर्थिक र औद्योगिक स्थिति र प्रतिष्ठा कायम।
Pavlodar ट्रेक्टर कारखाना: विनिर्माण विशाल को दुःखी कथा
अवलोकन, विशेषताहरु, प्रकार, र मालिकहरूको समीक्षा: पम्पिंग तेल लागि पंप
प्राविधिक रजत: आवेदन, गुण र भौतिक लागत
ब्लास्ट फर्नेस - smelting फलाम लागि दन्किरहेको
फोहोर पानी यांत्रिक सफाई: तरिका, सुविधा र क्षेत्रीय
सिएम डे जोंग र Luuk डे जोंग - नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध डबल झटका
दबाइ "Ivermek"। निर्देशन
इराक को काखमा को आधिकारिक कोट
घर थिएटर लागि निर्मित वक्ता
आकर्षण हाइनान द्वीप, चीन: विवरण, इतिहास र रोचक तथ्य
अक्सर बिरामी बच्चाहरु - बंशाणु वा आमाबाबुको लापरवाही?
Lipoma: यो के छ? के एक ट्यूमर हटाउन आवश्यक छ?